Dowladda oo dhiirigelisay Maktablayda Soomaaliyeed oo Ka Qayb Gashay Bandhig Buugaag oo Lagu Qabtay Qaahira – Radio Muqdisho
Dowladda oo dhiirigelisay Maktablayda Soomaaliyeed oo Ka Qayb Gashay Bandhig Buugaag oo Lagu Qabtay Qaahira
QAAHIRA 30 Janaayo 2015: Sii Hayaha xilka Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustafa Sheikh Cali Dhuxulow ayaa dhiirigeliyey Maktablayda Soomaaliyeed oo markii ugu horreysay ka soo muuqatay bandhig buugaag oo lagu qabtay magalada Qaahira waxaana Soomaaliya mataleyay Midawga Maktablayda dalka oo ay ka socdeen 14 maktabadood oo ka jira dhamaan Gobollada Soomaaliya, iyadoo Safaarada Soomaaliyeed ee Masar ay u fududeysay Maktablayda.
Furitaanka carwadan ayaa waxaa ka qeyb galay Ra’isul Wasaaraha dalka Masar Ibraahim Maxlab, Safiirka Soomaaliya C/laahi Sheekh Xasan, Qunsulka Soomaaliya Cali Bashiir iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda dalkaasi iyo qoraayaal ka kala yimid daafaha aduunka.
“Aad baan ugu faraxsanahay in 25 sano kadib aan kasoo dhex muuqano madal Carab iyo Cajam isugu timid. Waa tallaabo hormar ah oo aan u qaadnay dhanka horumarka iyo sare u qaadidda maqaamka Soomaaliya ay kaga jirtay dalalka Carabta, Afrika iyo Aduunkaba.” Sidaa waxaa yiri Maxamed Shiil oo hogaaminayay wafdiga ka socday Maktableyda Soomaaliya.
Ururka Maktablayda Soomaaliya ayaa sheegay in ka qaybgalka carwadan uga gol lahaayeen inay caalamka gaarsiiyaan in sheekooyinka Soomaaliya aysan ahayn burcad badeed iyo gaajo balse isbadal iyo horumar wayn dalka ka dhacay, loona gudbay in lasoo nooleeyo jiritaanka hay’adihii lafdhabarka u ahaa waxbarashada iyo aqoonta Soomaaliya.
Raysul-wasaaraha waddanka Masar ayaa si gooni ah u soo booqday qeybta ay Soomaaliya ku laheyd bandhigga, isaga aad u boorriyay ka qeyb-galkooda isla markaana ka codsaday Madaxa Ururka Daabacayaasha Soomaaliyeed, mudane Maxamed Axmed (Shiil) inuu laba jibbaaro dadaalka uu ugu jiro ku soo dabbaalidda Soomaaliya bandhigyada akhriska iyo aqoonta.
Safaaradda Soomaaliya ee Masar ayaa kaalin mug leh ka qaaadatay in Bandhig Carweedkan ay Soomaaliya safka hore ka soo gasho. Ururka Maktablayda Soomaaliyeed ayaa bogaadiyay dadaalkii shaqaalaha safaaradda Qaahira iyo sidii wanaagsanayd ee ay u suura galiyeen in sanadkan maktabadaha dalka ka jira ka qayb galaan madasl calaami ah.
Bandhigan oo sanadle ah ayaa waxaa ka soo qeyb galay 650 Madbacadood oo ka socda 26 Dal oo Carab iyo dunida kaleba isugu jira, waxuuna socon doonaa illaa 12-ka bisha Febraayo.
DHAMAAD – Wasaarada Warfaafinta & Hannuuninta Dadweynaha
Nin Soomaali-Mareykan ah oo lagu daray liiska argagixisada